トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Isizathu sokuba licebise oomoya yefowuni nokuvumisa ukujonga oluPhuhlisayo (apreyizali yefoni)
Ethetha ingcali mbono ngokomoya, watyelela wokuqala izangoma, kodwa kukho umfanekiso oko kwenziwa kwi esinzulu umoya emigodini ukungakhululeki, oko akusoloko kunjalo kwi practice.
phezu yefowuni oosiyazi ithamsanqa-mathamsanqa ukuba utitshala yovavanyo litchi nalo eninzi. Ukuba usebenzisa iinkonzo ebizwa
ifowuni ithamsanqa amabali, yinto enokwenzeka ukuba uzive ukhululekile uqhagamshelane nomyali oosiyazi ababhalise ngomnxeba ithamsanqa amabali site, ungakwazi ukufumana uvavanyo umbono yokomoya yefowuni.
indawo into yokuqala ngokuba umbono ngokomoya, nokuba kwiindawo kude, ngenxa yokuba into kuba ukuba bayakwazi iprojekthi abo musa abonakale engqondweni izangoma.
sizathu ukuncoma ucingo kungokuvumisa kwi-apreyizali umbono ngokomoya Uninzi iingenelo ngokusebenzisa
ifowuni kungokuvumisa kungokuba umgangatho oosiyazi kuba ngummeli wowona kwinqanaba elithile okanye ngaphezulu.
kule sayithi, kodwa sincoma ndawo ngomnxeba ithamsanqa-utshela Vernis, izangoma okanye abaxeli-mathamsanqa ababhalise Vernis waqhekeza ngokusebenzisa ireyithi yokupasa engu-3% okanye ngaphantsi nokuhlola, ngenxa yokuba kuphela eliphezulu-amandla abantu, Oku meza ngcono kunokuba ucele litchi ukuba oosiyazi abangamaziyo apho umntu sele.
Ukongeza, kukho kwakhona iqela kungenzeka ukuba umxube yabantu, ezifana njengoko nabakhohlisi kwi umntu ozibiza ukuba oosiyazi, ehamba.
usebenzisa intetho enjalo eyingozi ukufunda abandayo, ukuba uthembe ezingxoxo, kukho kwakhona umngcipheko wokuba okanye athengise izabelo ukhetho olubiza kakhulu.
ezinye nayo, wathabatha iadvanteji meko zengqondo ukuba lithemba ezingxoxo kaThixo, ukususela kwi ngemoto ukuze zithambekele ngakumbi isigqibo ixhala eqhelekileyo, kutyhefeka kwengqondo okanye, nayo zero oosiyazi ngolunya bazama ukulawula ingqondo le nyaniso na.
elo xesha, ngenxa yokuba kukho iimviwo ukuba site yefoni ithamsanqa amabali, njengoko nditshilo ngaphambili, loo izangoma ngolunya ifumaneka ngokukhululeka kukho ngesixhobo makakhutshwe eluhlwini.
ngokubhekiselele ekwakheni ukuzithemba ubudlelwane kunye izangoma, akuthethi bakuphikayo ukuba kancinane kukho umzuzu ubuso ngobuso-apreyizali, ukuba ubukhe ibetheke izangoma eyingozi ebusweni-to-face-apreyizali, oko kunokubangela uqiniseke ngakumbi ngamandla kuba, ukuba i-apreyizali umbono yokomoya lowo wokuqala, kuqala kubonakala ukuba kulungile ukwazi umbono ngokomoya ikhangeleka njani uvavanyo ngomnxeba.